Ike ikuku. Greenhouses na ntinye ha n'ime ugbo | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Mgbanwe ihu igwe, Ihe
Ojiji nke ike geothermal gbasasiri ike na mba ufodu dika Islandia nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ike eji mee ihe n'ihi ọnọdụ ya. N'ebe ndị ọzọ nwere otu ohere, dịka Azores, ọ gbasaghị oke. Na mba ndị ọzọ dị ka Holland eji ya eme ihe na kpo oku na Madrid dika imaatu, eji ya n’ime sistemu ikuku nke ime obodo metro. Ngwa maka oru ugbo, ka abughi ebe nile, nwere ike ikwe ka enwe ulo oru griinite n’iru.
Ike Geothermal bụ ike kachasị dị irè ma site na echiche nke ike oriri na nchekwa akụ na ụba. Na-anọchi anya a ike nchekwa na echekwa n'etiti 60 na 80% ma e jiri ya tụnyere usoro ikuku ikuku dị ka gas ma ọ bụ mmanụ dizel. Ọ dịkwa ike karịa ike ndị ọzọ nwere ike imeghari, dị ka biomass ma ọ bụ anyanwụ, ma e jiri ya tụnyere nke ọ na-anọchite anya nchekwa nke ihe karịrị 50%.
Geothermal griin haus
A na-achọ ya site na iji ike nke geothermal, ọ bụghị naanị inye osisi ihe ndị kachasị mma gburugburu ebe obibi na mmepe n'oge ọ bụla ha na-eweta mgbanwe, kamakwa iji belata ọnụ ahịa ike ruo na nke kachasị na ihe dị mkpa, iji belata oke mmetọ ikuku.
Holọ griin ha maka iji rụọ ọrụ ugbo nwere mkpa ike nke ga-achọ ihe dị ka tọn 400 nke mmanụ mmanụ na nkezi kwa hectare na ọnwa na-adịchaghị ọkụ. Mkpa ọkụ ndị a na-ere mmanụ ga-ebelata na 0 site na iji okpomọkụ dị n'ime na gas gas nke emepụtara na omimi ụfọdụ.
Site n'iji usoro ikuku ikuku dị iche iche eme ihe, enwere ike inye okpomọkụ dị mma n'afọ niile site na ịbawanye okpomọkụ n'oge oyi ma belata ọnọdụ dị n'ime ya n'oge ọkọchị. Ojiji nke ihe ndi ozo na cascade bu otutu oge, ebe obu na osisi obula achoghi otu caloric. Na modulu mbụ nke griin haus, na kọntaktị na mmiri kacha ekpo ọkụ, a ga-ahụ osisi ndị nwere nnukwu mkpa. Ojiji cascade a na-echekwa ego na ume.
Typedị ike a nwere ọtụtụ uru: a ga-ezere ịdabere na ume n'èzí, ihe mkpofu ga-ebelata opekata mpe ma mee ka mmetụta gburugburu ebe obibi dị ala karịa nke ndị ọkụ na-ere ọkụ na-akpata. Na mgbakwunye, sistemụ a bụ nnukwu nchekwa, ma na akụnụba ma na ume ma na-eche na enweghị mkpọtụ mpụga. Ekwesiri iburu n'uche na obu ume ohuru ma obughi n'okpuru onu ahia. Nha achọrọ maka osisi dị obere ma e jiri ya tụnyere ike ndị ọzọ na mmetụta ya dị oke ala ebe ọ bụ na ọ chọghị iwu mmiri, ịkwa osisi, ma ọ bụ iwu tankị nchekwa mmanụ.
Ọ bụ ezie na ọ nwekwara ụfọdụ ndọghachi azụ: n'ọnọdụ ụfọdụ nsị nke hydrogen sulfide na n'ọtụtụ buru ibu anaghị achọpụta ma bụrụ nke na-egbu egbu, mmetọ nke mmiri dị nso na ihe ndị dị ka arsenic, amonia, mmetọ nke ikuku, mmebi nke odida obodo na nke ahụ enweghị ike ịbụ njem (dị ka isi ike) na ojiji ya nwere oke ebe ụfọdụ.
Ozi ndi ozo:Mgbanwe ihu igwe: ụwa a ọdachi ga-adakwasị ya?, Northern Europe na njikere maka oké ifufe, Ihe oyiyi kachasị mma nke ugwu ugwu Grímsvötn,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ike ikuku. Greenhouses na ngwa ha na oru ugbo